Lapho ubuciko buba umculo. Lona uhlaka olunesipikha esivela ku-Ikea naseSonos, Symfonisk | Ngivela kwa-mac
Lapho ubuciko buba umculo. Lolu luhlaka olunesipikha esivela ku-Ikea naseSonos, eSymfonisk
UJordi Gimenez | 15/07/2021 16:00 | Izesekeli
Uma sikhuluma ngezipikha, sonke sicabanga ukuthi kufanele kube yinto nje ekhipha umsindo omuhle futhi enobuhle obuhle noma obungephi. Kepha kulokhu, i-Ikea besisebenza kwezinye izikhulumi isikhathi esithile esidlula ngaphezu kokuba izikhulumi ezilula futhi Uma ungeza ikhwalithi ezwakalayo yeSonos emsebenzini ka-Ikea, uthatha umkhiqizo ohluke kakhulu kukho konke ongakuthola emakethe.
Kulokhu sikwazile ukuvivinya isipikha esingabukeki njengesipikha, ikakhulukazi ibhokisi. Ikea Symfonisk inikeza ithuba lokulalela umculo kusipika esinokwakheka okwehlukile kunokwejwayelekile, yibhokisi elikhipha umculo. Leli bhokisi lesipikha se-Wi-Fi lisemugqeni wemikhiqizo ye-Ikea Symfonisk, Njengesibani setafula noma ishalofu elethwe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
1 Ukuxhuma ibhokisi leSymfonisk
2 Ikhwalithi yomsindo, amandla nokwakhiwa
3 Namuhla kuqala ukuthengiswa komdwebo ezitolo
3.1 Izinkinobho zomzimba kanye nesidingo se-plug
3.2 Ubukhulu bozimele beSymfonisk
3.3 Okwalabo abangamazi uSonos okwamanje
Ukuxhuma ibhokisi leSymfonisk
Into enhle ngalezi zipikha ukuthi zixhuma ngqo nge-Wi-Fi ne-Wi-Fi ingaxhunyaniswa nezinye izikhulumi ze-Sonos. Le nqubo engabonakala inzima ukuyenza ilula impela futhi noma ngubani angayenza.
Impela iningi lenu selivele linesipikha se-Apple noma ngqo i-Sonos futhi kulokhu ibhokisi / isikhulumi se-Ikea esisha sinikeza ukulula kokuxhuma okufanayo nalezi zipika, okunikeza umsebenzisi ithuba lokuxhuma isipikha nabanye iyatholakala kunethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi.
Uhlaka lweSymfonisk nesipika kungasetshenziswa njengefayela le- umthombo owodwa womsindo egumbini noma xhuma namanye amadivayisi avela kububanzi be-SYMFONISK noma ezinye izikhulumi zesiginesha zeSonos. Njengalapho isibani neshelufu lezincwadi elivule ibanga, lesi sikhulumi esisha naso siyingxenye yohlelo lweSonos.
Njengokuhlala kwenzeka kuleli cala, ukuba yisikhulumi seSonos, okuhlanganiswe nohlaka kumele sebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Sonos ukuphatha ezinye izipikha ezixhunyiwe noma ukumane uzilungiselele. Nalu uhlelo lokusebenza lweSonos, olumahhala ngokuphelele.
Ikhwalithi yomsindo, amandla nokwakhiwa
Uma sikhuluma ngezikhulumi zenkampani yeSonos asinakungabaza ukuthi ikhwalithi yomsindo iqinisekisiwe. Kulokhu, umdwebo ungabonakala njengomkhiqizo wokuhlobisa kunokuthile okunye, kepha empeleni umsindo eliwukhipha ungowekhwalithi ephezulu namandla. Ingxenye yomsindo ngokungangabazeki ibaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi, kepha ukukuthola lokho ngaphezu komsindo omuhle unokwakheka okwehlukile futhi okusha kwenza i-Ikea ifake iphakethe eliheha ngempela.
Kulabo abaneminye imikhiqizo ebangeni leSymfonisk, singasho ukuthi ikhwalithi yomsindo iyafana naleyo yesibani noma ishelufu ebelisungulwe ngaphambilini. Kuyikhwalithi yomsindo enhle kakhulu ebheka ubukhulu balesi sakhiwo futhi ikakhulukazi ukwakheka kwaso. Lesi akusona isikhulumi sephathi kepha singaphilisa kahle igumbi lakho lokuphumula ngomculo omnandi futhi simangaze izivakashi noma izihlobo ezikuvakashelayo.
Namuhla kuqala ukuthengiswa komdwebo ezitolo
Inkampani yaseSweden inikela ngokuthengiswa kusuka ku- namuhla ngoJulayi 15, 2021 ibhokisi elinesipikha seSonos kuzo zonke izitolo zalo futhi nakanjani esitolo esiku-inthanethi. Kulokhu, inkampani ibinokubhuka okuvulekele bonke labo basebenzisi abathanda ukuthi leli bhokisi lesipikha lixhumeke nge-Wi-Fi kusukela namhlanje.
Ngokusho kombiko Impilo Ekhaya by IKEA, Ama-60% alabo abahloliwe bakholelwa ukuthi umculo uyisithako esibaluleke kunazo zonke ukudala umoya ofanele ekhaya yingakho befuna indlela yokuletha lo mculo ngezinto zokuhlobisa. I-IKEA kanye noSonos bayakubona ukubaluleka komsindo nomphumela omuhle onawo empilweni yasekhaya, ngakho-ke kubukeka sengathi bazoqhubeka nokusebenza kulesi sici iminyaka embalwa.
Izinkinobho zomzimba kanye nesidingo se-plug
Uhlaka luphinde luvele ngemuva, lube sohlangothini olulodwa futhi lufinyeleleke ngokuphelele ezinkinobho eziningi. Phakathi kwazo izinkinobho zevolumu, ukukhulisa nokwehlisa ivolumu kusuka kufreyimu uqobo nokuma nokudlala umculo. Kulokhu, zisendaweni efinyelelekayo futhi umsebenzisi ngeke abe nezinkinga zokuzifinyelela. Sincoma ukuthi usebenzise kangcono ukulawula okuvela kuhlelo lokusebenza lweSonos, kepha inketho yemanuwali kungenzeka futhi ngenxa yalezi zinkinobho zomzimba.
Ngokusobala, ukuba yisipikha, kudinga ukuxhumana namandla kagesi futhi kulokhu ikhebula eliyengezayo lide ngokwanele ukufinyelela ipulaki kepha ngokungangabazeki liyingxenye engemihle yebhokisi ngoba, yize kuyiqiniso, inezinto eziningi izikhala esingadlula ngazo ikhebula ngemuva ngaphandle kokuyincinza, ikhebula libonakala isikhathi esiningi lapho sililengisa odongeni. Yilapho ubuhlakani bakho bufika khona kancane ukukufihla noma usebenzise lo mdwebo ngaphezulu kwetafula elibonakalayo ukuze ungabonakali. Akuyona into embi nhlobo ngoba ikhebula limhlophe futhi izindonga eziningi zimhlophe, kepha uma ungazithandi izintambo eziveziwe, kuzodingeka ucabange ngokuthile ukufihla lokhu.
Ubukhulu bozimele beSymfonisk
Kumele sibheke lesi sici ngoba ungafuna ukubeka ifreyimu endaweni ethile egumbini lakho lokuphumula, ekamelweni lokulala, ekamelweni noma kokufanayo. ISymmonisk inezilinganiso ezifana nezomdwebo omkhulu, yize kuliqiniso lokho isisindo sayo siphakeme ngaphezudlwana kwesikafremu ojwayelekile ngenxa yesipikha esakhelwe ngaphakathi ngaphakathi. Izilinganiso eziqondile yilezi:
Ububanzi: 41 cm
Ukuphakama: 57 cm
Ukujula: 6 cm
Ikhebula ubude: 350cm
Kubalulekile ukusebenzisa i izindlela zokubopha Umdwebo wengezwa uma sizowubeka etafuleni noma uma sizowilengisa odongeni. Esimweni sokuqala, inkampani ingeza iteyipu ukuze ingawi uma kwenzeka kunyakaza futhi kusibonakaliso esingezansi sama-buffers enjoloba lokho kwenza kungasheleli. Ama-bumpers enjoloba angabekwa ngezindlela ezahlukahlukene avumela umsebenzisi ukuthi abeke umdwebo ngokuqondile, ngokuvundlile noma ulenga ngqo odongeni.
Okwalabo abangamazi uSonos okwamanje
ISonos ingenye yezinkampani zezipikha ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Njengomsunguli we Isipiliyoni somsindo wasekhaya wamakamelo amaningiI-Sonos emisha ikusiza ukuthi uzwe kangcono ngokunikeza abantu ukufinyelela kokuqukethwe abakuthandayo nangokubavumela ukuthi bakulawule ukuthi bafuna kanjani futhi kuphi.
Yaziwa ngokunikela nge isipiliyoni somsindo esihle kakhulu, i-aesthetics yokuklama ecatshangelwe kahle, ukusetshenziswa okulula, neplatifomu evulekile, iSonos yenza okuqukethwe komsindo kufike ngokugcwele kubo bonke. Indlunkulu yeSonos iseSanta Barbara, eCalifornia
Ifreyimu enesipikha se-WiFi inentengo kuma-euro angama-199 Yenziwe nge-100% i-polyester ne-ABS plastic kanti itholakala ngemibala emibili ngombala omnyama nomhlophe. Ungathenga amafreyimu ahlukene ngokuthanda kwethu ngalesi sikhulumi esifuna ukwazi ngayinye yazo inenani lama-euro angama-16 futhi konke lokhu kuyatholakala kusukela namhlanje ezitolo zomzimba kanye kuwebhu eku-inthanethi.
Uhlaka lwesipikha se-Ikea Symfonisk
Ukubuyekezwa kwe: UJordi Gimenez
Ukulungiswa kokugcina: 15 de julio de 2021
Ikhwalithi yomsindo wesipikha
Amabili aqeda ngombala omhlophe noma omnyama
Kunzima ukufihla ikhebuli uma uyibeka odongeni
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Izesekeli » Lapho ubuciko buba umculo. Lolu luhlaka olunesipikha esivela ku-Ikea naseSonos, eSymfonisk
Ufuna ukudala umugqa wethegi okhuthazayo kaTed Lasso? Bhalisela lezi zikhathi ezibonakalayo
Izinyanga Ezine Zamahhala ze-Apple Music yamaMelika NamaVeterans